news2dago | Aogositra 2009
[Ankapobeny ] 13 Aogositra, 2009 07:27
Ho matotra ara-politika ve Rajoelina?
Vita ity ny sata hifehy ny tetezamita ary nosolon'izy 4 miralahy mianaka tena ny firehina misy teto madagasikara. Ny atony nisafidianana azy 4 miralahy moa dia noho izy ireo efa nifandimby nitondra ny repoblika fahatelo fa tsy inona akory dia i Zafy Albert - Ratsiraka Didier - Ravalomanana Marc - ( Andry Rajoelina) izay nitondra an-keriny ihany koa ny repoblika faha telo. Mazava ho azy fa lanim-bahoka ny filoha 3 miralahy ary mahasolotena ny vahoaka malagasy tsara satria samy nahazo ny atsasamanila ny mpifidy avy. Amiko dia tsy tokony hiteny intsony ny antoko politika hafa fa miditra any @ ireo firehana ireo fotsiny sisa dia any no tokoay hiady seza mafy.
Mora kokoa ny manendry ny olony eo @ ireo firehana telo ra8-zafy-deba mihoatra @ Rajoelina satria somary vitsivitsy ny mpitarika politika miara miasa aminy ankehitriny sahirana kosa ny eo @ ankolafiny TGV ankehitriny satria dia ady seza izay tsy misy toy izany no ao ankehitriny. Tsy mahagaga fa ao avokoa ireo goaky sy jiolahimboto politika mpanongam-panjakana gaigy lahy sy ny antoko tsy manana vahoaka fotsiny fa zara izy mpitarika fotsiny no fantatr'olona dia efa antoko politika izay. Ao koa ireo efa nitsapa vahoaka kanefa dia nalohan'ny vahoaka ka manery an-kolaka an'ingahy Andry Rajoelina @ fomba rehetra hanendreny azy @ toerana samy hafa hozaraina.
Mazava hoazy fa maro ny tsy faly @ ity sata voasonia satria ho very seza koa fotonan'izao hanilihina ireo mpanao politika ireo toro hevitra ihany ny ahy raha mieritreritra ny mbola hanohy ny politika ingahy Andry Rajoelina ireo ihany mantsy no nanongana an'i Zafy sy ra8 t@ fotonany avy koa inona moa no hanaka an'i Andry Rajoelina tsy hanilika ireo olona mpitolona @ fitadiavan-tseza ireo? Aiza ve koa 10 Tapitrisa ariary be izao no takin-drizalaky t@ filohan'ny tetezamita ho tambin-karama!!! nefa ny vola efa kely sy fehezina. Mazava ny teniny namaly azireo t@ izay oe tsy manana an'izany homena anareo aho fa izay tsy hiaraka amiko mahazo mandeha!!! mandrak'ity anefa toa ireo mbola milafika ao daholo ry zalahy.
Faly mihitsy aho ankehitriny fa rava ity FAT ity satria dia mangoron-karena fotsiny no ataony tao ny lasa miliaridera tampoka t@ ireo mpanao politika ireo sy ny maro tsy ho voatanisa eto @ fitsetsefana ny volam-panjakana nefa vao 3 volana monja no teo. Dia Ravalomanana ihany no atao fahirano tsy avela hody eto mahagaga ihany ho an'ireo mpanaram-baovao ny fihetsika mamely mafy an'i Ravalomanana manahy mafy tsinona fa mety mbola ho lany izy @ fifidianana satria tena mbola tiany vahoaka izy h@ izao.
Hivoaka androany kosa ireo gadra politika raha tsy misy ny fiovana @ ora farany indray. Misy mantsy ny olona sasany dia faly hampitarazoka fotsiny an'ity raharaha iray ity.